Health Services > Illness and Communicable Disease > COVID-19 Soomaali
Taariikhdii la qoray 6/1/20
Qoysas barakacay; ilaha cuntada, dharka, dhaqaalaha, daawooyinka
Goobaha laga sooqaatoadeegyada cuntada degdega ah ee MPS waxay u furan yihiin sidii caadiga ahayd; goob cunto cusub oo laga helo Longfellow Park; Goobaha cuntadu waxay sii socon doonaan ilaa xagaaga
Caawinta sida loo maareeyo walwalka iyo walaaca
Sidaad u caawin karto
Munaasabadaha qalin-jabinta iyo dib u soo celinta
Taariikhdii la qoray 5/21/20
Goobaha laga soo qaado cuntada waxaa la xirayaa Maalinta Xusuusta
Barnaamijyada Waxbarshada Xagaaga iyo Waxabarashada Bulshada ee MPS
Ka soo qaadashada alaabada ardayda dugsiga usbuuca ugu horeeya ee bisha Juun
Taariikhdii la qoray 5/14/20
Kormeeraha Guud Graff: Waan ku wada jirnaa midaan
Caafimaadka dhimirka iyo taageerooyinka loogu talo galay Xagaaga
Taariikhdii la qoray 5/13/20
Habeen hore, Guddiga Waxbarashada Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis waxay u codeeyeen inay ansaxiyaan Fahanka Guud ee Qorshaha Degmada ee Dhammeystiran (CDD). Waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo qofkasta fikirkooda iyo shaqadooda adag ay qabteen iyaga oo naga caawiyeen hormarinta qaabeynta waxbarashada si aan u helno waxbarasho PK-12 oo si fiican u dhisan sidaa darteed arday walba oo ku nool qayb kasta oo magaalada ka mid ah in lagu qalabeeyo waxbarasho, bulsho / shucuureed, iyo xirfado farsamo si ay ugu guuleysataan kulliyadda iyo / ama xirfadaha shaqada.
Taariikhdii la qoray 5/8/20
Bisha Maayo 12eeda: GuddigaWaxbarashada Dugsiyadu waxay qoondeeyeen inay u codeeyaan Fahanka Guud ee Qorshaha Degmada ee dhameystiran
Cunno dheeri ah ayaa lagu daray goobaha cuntada laga soo qaado
Waxarashada Massaafada Fog: Ardayda waxay ka gali karaan hada qolka Google Classroom nidaamka ciyaarta
Ilaha laga helo: Taageerada aaladda ee ardayda iyo qoysaska
Taariikhdii la qoray 4/29/20
Isbedelada darajooyinka Rubucyada 4aad iyo 3aad
Su'aalo iyo Jawaabo ku saabsan Korono Faayrus (COVID-19)
Taariikhdii la qoray 3/11/20
Macluumaadka Qaadashada cuntada ardayda inta lagu guda jiro xiritaanka dugsiyada sababtoo ah hakinta cudurka COVID-19
Cunnooyinka waxaa heli kara ilmo kasta
Waxaan u baahan nahay inaan u midoowno waqtigan xaaladaha adag
Waxaan si aad ah ugu qanacsanahay oo aan ku faraxsanahay inaan ahay Kormeeraha guud mid ka mid ah Dugsiyada ugu waaweyn oo isku dhafan ee gobolka Minnesota. Waxyaabaha ay nagu soo kordhiyaan shaqaalaheena kaladuwan iyo xubnaha ardayda waxay naga dhigayaan kuwo hodan ah oo muwaadiniin caalami ah oo xog ogaal ah.
Sidaas darteed, waxaan dareemayaa inay muhiim ii tahay inaan markale idinla wadaago fariin aan direy horaantii bishaan. Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis ayaa si cad u dhalleeceeyay tirada sii kordheysa ee weerarada cunsuriyada iyo naceybka loo geysanayo dadka Aasiyaanka ah ee halkaan jooga iyo dalka oo dhan.
Waa inaan, is-garab istaagnaa hadaan nahay dugsiyada bulshada ee Dugsiyada Dadweynaha Minneapolis, inaan u istaagno midnimada ka dhan ah dhammaan noocyada xoogsheegashada, hadalada nacaybka ama xadgudubka yaryar ee loo geysto ardaydayada Aasiyaanka Mareykanka ah, shaqaalaha, qoysaska iyo deriska. Waa inaanan u oggolaan in aan waxyaabaha baqdinta ama macluumaad khaldan oo ku saabsan fayraska COVID-19 inuu na kala sooco. Waxaan si wada jir ku xallin doonnaa dhibaatadan. Wada jirkeena Kaliya ayaan u sii joogteyn karnaa dugsiyadeena xooggan #MPS Xoog.
Kormeeraha Guud Ed Graff